अखिल छैठौ बागलुङद्वारा संगठन बिस्तारको कार्य तीब्र / विभिन्न विद्यालयमा समिति गठन ! – ebaglung.com
अखिल छैठौ बागलुङद्वारा संगठन बिस्तारको कार्य तीब्र / विभिन्न विद्यालयमा समिति गठन !
२०७६ भाद्र १२, बिहीबार २१:११	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
प्रकाश छन्त्याल, बागलुङ बरेङ २०७६ भदौ १२ । आगामी असोज ३ र ४ गते हुन गैरहेको अ ने रा स्व बि यु ९छैठौ०को जिल्ला सम्मेलनको तयारीको क्रममा अखिल छैठौ बागलुङद्वारा संगठन बिस्तारको कार्य तीब्र पारिएको छ ।
सोही सिलसिलामा बरेङ गाँउपालिका वडा न २ स्थित सर्बोदय माध्यमिक बिद्यालय बरेङमा बिहिबार कक्षा ११ र १२ का बिद्यार्थीहरुलाई संगठित गर्दै जीवन थापाको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय मुल ईकाई समितीको गठन गरिएको छ । जसको उपाध्यक्ष करिश्मा सुनार, सचिव लेखान्त गिरी, सह सचिव रिता थापा र कोषाध्यक्षमा सन्देश पोखरेल चयन भएका छन ।
यसैक्रममा सर्बोदय माध्यामिक बिधालय बरेङमा कक्षा ९ र १० मा होम बहादुर सुनारको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय ईकाई कमिटी गठन गरिएको छ । जसमा उपाध्यक्ष मन्जु पुन,सचिव पुर्ण बहादुर थापा, सह सचिव गंगा गुरुङ र कोषाध्यक्षमा दिपा थापा चयन भएका छन ।
राङखानी माध्यमिक बिधालय राङखानीमा मनोज पुनको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय, धुल्लु लिउवा माध्यमिक बिधालय लिउवामा प्रेम परियारको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय, जनता माध्यमिक बिधालय पाहीमा टुकनाथ आचार्यको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय, जनता माध्यमिक बिद्यालय पैंयु थन्थापमा मिलन सप्लाङगीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय,बिजुवा माध्यमिक बिधालय पैयुमा झपेन्द्र थापाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय , सर्बोदय जनक माध्यामिक बिधालयमा सिम्रन नेपालीको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय ईकाई कमिटी गठन गरिएको छ ।
संगठन बिस्तारको काम असोज १ गते सम्म जारी रहने अखिल छैठौ बागलुङका जिल्ला अध्यक्ष ईन्द्रमणि पाण्डेले बताए ।
पुस्तकालय दिवसका अवसरमा बिद्यामन्दिर पुस्तकालयमा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न !
घरमा १६ घण्टा काममा जोतिने महिलाका लागि भत्ताको व्यवस्था गर ! तंग्रामको तीजी कार्यक्रममा सांसद संग्रौलाले भनिन : “अहिले पनि समाजमा महिलाको पहिचान र प्रतिष्ठा छैन !”